Gabaasi Komiishiniin Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Dhiyeesse Adda Bilisummaa Oromoo Kan Hin Amansiisnee fi Fudhatama Kan Hin Qabneedha – Adda Bilisummaa Oromoo
Komiishiniin Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa akka waan mirga dhala namaatiif falmuu fi sarbiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru qorachaa jiruutti dubbata. Haatahu malee gabaasawwan komiishinichi dhiyeessu tokko tokko loogiidhaan kan guutamanii fi dantaa siyaasaa bu’uura kan godhatan ta’uu yeroo baay’ee irra deddeebinee taajjabnee jirra. Dhaabbati Mirga Dhala Namaa walaba ta’e tokko, ga’ee fi dirqamoota mirga dhala namaa ilaalchisee qabu, haala oogummaa bu’uura godhateen loogii tokko malee walaba ta’ee sirnaan raawwachuu qaba jennee amanna. Akkasumas dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu tokko, sarbiinsa mirga dhala namaa raawwatame qorachuudhaaf, qaamolee naannoo sarbiinsi mirga dhala namaa itti raawwatame keessatti argaman kanneen akka maatii, miidhamtootaa fi ragoolii ijaan argan, akkasumas jiraattota naannoo, qondaaltota mootummaa irraa ragaalee fi odeeffannowwan barbaachisoo ta’an walitti qabuudhaan bu’uura seera biyyaalessaa fi seerota idil-addunyaa dhimmichaan wal qabatuun mirkaneessuutu irraa eegama jennee amanna.
Tibba darban keessa gabaasawwan loogiin guutamanii fi uummata dogoggorsan hedduu taajjabaa kan turre yoo ta’e iyyuu, ibsi komiishinichi gaafa guyyaa Hagayya 26/2021 baase addatti qalbi keenya hawwatee jira. Ibsichi haleellaa/miidhaa gara jabeenyaa Milishaan Amaaraa fi humnoonni mootummaa uummata Oromoo nagaan jiraatuu fi hidhannoo hin qabne irratti raawwatan xiqqeessuudhaan, kan miidhamtoota Amaaraa garmalee dhaadhessee jira. Gabaasi Komiishiniin Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa dhiyeesse kun akka waan Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBOn), Godina Wallaggaa Bahaa, Aanaa Giddaa Kiramuu keessatti jiraattota saba Amaaraa 150 ajjeeseetti ibsee jira. Dabalees, gabaasichi akka waan ajjeechaan saba Amaaraa irratti xiyyeeffatee raawwatameetti eeree jira. Haatahu malee miidhamtootaa fi jiraattota naannoo irraa akka mirkaneessinetti, ibsi Komiishiniin Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa dhiyeesse, waa’ee diraamaa siyaasaa osoo taateen kun hin uumamin guyyoota muraasa dursee raawwatame hin eerre. Akkuma duraan baratame, qaamoleen mootummaa fi miiltowwan isaa, lolli kun osoo hin eegalin guyyoota muraasa dursanii diraamaa siyaasaa tokko qindeessanii turan. Kaayyoon diraamaa kanaas sochii WBOn naannicha keessatti gaggeessu irratti duula maqa-balleessii banuudhaaf ture. Taateen kun osoo hin raawwatin guyyoota lama dursanii, Humni Amaaraa hidhatan laga Abbayyaa ce’uudhaan, aanaalee kanneen akka Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Hagamsaa fi Amuuruu Jaartee qabatan. Ergami isaanii jalqabaas dubartootaa fi daa’imman Amaaraa naannicha jiraatan buqqaasuu ture. Kanumaan mootummaan
dhoksaadhaan gocha duguuggaa sanyii akkanaa raawwachuudhaaf sarara tajaajilaa bilbilaa fi quunnamtii naannichaa addaan kute. Ergamni isaanii lammaffaan lola banuudhaan namoota nagaa heddumminaan erga ajjeesanii booda, akka waan WBOn garee saba tokkorratti xiyyeeffatee ajjeechaa raawwatuutti fakkeessuudhaan miidiyaalee garaagaraa irratti ololanii bu’aa siyaasaa irraa argachuudhaaf ture. Dubartoonnii fi daa’imman erga buqqaa’anii boodas, miliishaan Amaaraa, humnoota mootummaa waliin ta’uudhaan baayyatanii meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhachuun uummata Orommoo magaalota kanneen akka Wasti, Sireedooroo, Hagamsa fi Haroo/Lalisee keessa jiraatan irratti lola banan. Lolli kunis guyyoota sadiif walitti fufiinsaan kan gaggeeffame yoo ta’u, uummata Oromoo nagaa hidhannoo hin qabne hedduu ajjeesan. Gabaasi Komiishiniin Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa dhiyeesse garuu gocha duguuggaa sanyii uummata Oromoo hidhannoo hin qabne irratti raawwatame dhoksuudhaan, akka waan ajjeechaan jiraattota Amaaraa naannichatti argaman irratti raawwatamee fakkeessuun garmalee dhaadhessee kan ibse yoo tahu, kanaanis miidiyaaleen garaagaraa WBO balaaleffachuu irratti fuuleffatanii jiru. Kanaaf ABOn, ibsi Komiishiniin Mirga Dhala Namaa Itoophiuaa gaafa guyyaa Hagayya 26/2021 Godina Wallaggaa Bahaa keessatti jiraattonni Amaaraa 150 ajjeefamaniiru jechuun baase, loogiidhaan kan faalame, hir’uu fi soba jedhee amana.